बल्ल खुल्यो नेहा पुनको हत्याको कारण,किर्तन खड्कीले के बयान दिए ? - Himalayan Kangaroo
बल्ल खुल्यो नेहा पुनको हत्याको कारण,किर्तन खड्कीले के बयान दिए ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २६ माघ २०७२, मंगलवार ००:१८ |
काठमाडौं । यौनको मामिलामा मानिसहरु पशुपनि बन्न सक्छन् भन्ने उदाहरण फेरी फेवातालको शहर पोखरामा फेला परेको छ । विशेषत पुरुषत्वको दम्भमा नेपालमा महिलामाथि शोषण कुनै नौलो विषय होइन नै । तर यसपटक एउटी चर्चित अनुहार एक यौनपिपासुको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दा मृत्युवरण नै गर्न पुगेकी छिन् । ती पिपासु पक्राउ परे तर सम्भावनाको ठूलो खानी भएकी एक प्रतिभाशाली किशोरी फेवामा फेरी नफर्किने गरी अलप बनेकी छिन् ।
किर्तन खड्गी उर्फ सतिश; जसले आफूसँग शारीरीक सम्पर्क गर्न नमानेपछि नायिका यरुना पुनको हत्या गरे । र, यिनै सतिशलाई कास्की प्रहरीले सोमबार सार्वजनिक गर्यो ।
पोखरा न्यूरोडस्थित स्माइल क्याफेमा रिसेप्सनिष्टको काम गर्ने १८ वर्षकी नेहा पुन मगरको हत्या, मात्र यौनको आवेगमा भयो । माघ १८ गते राति सतिश लगायतका अन्य साथीहरुसँग खाजा खाएर करिब ९ बजे घर फर्कन लाग्दा सतिशले नेहालाई घर पुराइदिने भन्दै मोटरसाइकलमा चढाए । केही पर पुगेपछि सतिशले त्यस रात बाहिर बसेर रमाइलो गर्न नेहासँग कुरा गरे । तर नेहाले सतिशको प्रस्तावको बिरोध गरिन् । त्यसपछि रिसको झोकमा हेलमेटले हान्दा नेहाको ज्यान गयो ।
यौनको आवेगमा आएर एक यौनपिपासुले १८ वर्षीय युवतीको हत्या गरेपछि पोखरा र देशैभर त्यसको चर्को बिरोध भयो र अपराधी पक्राउ गर्न दबाब प¥यो । पोखरा लगायत देशैभर नेहाको हत्यारा पत्ता लगाउन आन्दोलन भयो र अधिकारवादी तथा मगर समुदायले प्रशासनसमेत घेराउ गरे । नेहा मगर चलचित्र ‘गाउला र ‘युपा’मासमेत अभिनय गरिसकेकी अभिनेत्री हुन् र उनको हत्यामा संलग्नलाई चाँडो पक्राउ गर्न कलाकर्मीहरुलेसमेत आन्दोलन गरे ।
१८ गते राति हत्या गरिएकी नेहाको शव प्रहरीले १९ गते बिहान मात्रै भेटेको थियो । त्यसपछि नेहाको हत्या गर्ने अपराधी खोज्न सक्रिय बनेको प्रहरीले यसअघि पनि सतिशलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गरेको थियो । तर त्यसबेला सतिशले समयमै घरमा पुराएर छाडेको भनेपछि उनलाई छाडिएको थियो । तर हत्यामा सतिशबाहेक अन्यको संलग्न हुने कुनै आधार नदेखेपछि प्रहरीले आइतबार पुनः पक्राउ गरी सोधपुछ ग¥यो र उसले अपराध स्वीकार गर्यो ।
प्रहरीले सोमबार अपराधीलाई सार्वजनिक गरेपछि प्रहरी कार्यालय बाहिर नेहाका आफन्त तथा सुभेच्छुकहरुले हत्यारालाई फाँसी दे भन्दै नाराबाजी गरेका छन् । हत्यारा पत्ता लगाएप्छि प्रहरीले अब अदालतमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
Previousमाओवादीका सबै नेता योग्य,लडाकू चाहिं किन कोही अयोग्य ?
Nextआज सोनाम र ग्याल्पो ल्होछार,भव्यताका साथ मनाइदै
१६ आश्विन २०७५, मंगलवार ०६:२४
अष्ट्रेलियामा गैरकानूनी रुपमा बस्दै ६० हजार विदेशी, धेरै मात्रामा छन् अमेरिकी र बेलायती
२० पुष २०७४, बिहीबार ०३:२९
अष्ट्रेलियामा फेशन डिजाइनिङ्ग पढ्नको लागि आवश्यक योग्यता र लाग्ने शुल्क
३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०५:३३
ट्रकमा यात्रा गर्दै गरेका दुई महिलामाथि सामूहिक बलात्कार